Ny ankizy sy ny olon-dehibe izay manana fisainana mahagaga dia afaka mamorona lahatsoratra vita tanana, mahaliana ary mahazatra avy amin'ny fitaovana tsy ampoizina. Amin'izao fotoana izao, indrindra amin'izao fotoana izao ny mpankafy hamorona tontolon'ny tavoahangy amin'ny gazety. Sarotra be io asa io, nefa tena mahaliana ilay izy, noho izany dia manintona ankizy maro isan-karazany, ary koa ny ray aman-dreniny.
Ny tena mahazatra dia ny karazan-kofehy amin'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony. Ny lehilahy izay mahafantatra ny fomba famoronana asa tanana avy amin'ny fantsom-panafody dia mora atao ho an'ny olon-tiany, ary koa mandray anjara amin'ny fifaninanana ho an'ny ankizy amin'ny famoronana. Azonao atao ny mahatakatra ny fomba anaovana ny raozy ho an'ny tenany manokana ary hampiasa azy ireo ao amin'ny asa, ireo ankizilahy sy ankizivavy dia hanampy ireo torolàlana manasongadina ao amin'ny lahatsoratra.
Ahoana no anaovanao fantson-tsoavaly ho an'ny asa tanana ataonao?
Voalohany indrindra, ilaina ny mahatakatra ny fomba ahafahana manao fantsom-panafody amin'ny gazety tranainy, izay azo antoka fa hita any amin'ny fianakaviana tsirairay. Azonao atao ireto:
Ny pejin'ny gazety tsirairay dia mihazakazaka amin'ny 9 cm ny sakany. Raha avo roa heny ny pejy, dia tsy maintsy tapaka aloha izy ireo. Arakaraky ny andalana azon'izy ireo dia aforeto amin'ny gazety antsy ny gazety.
Tokony ho toy ny zana-trondro maromaro ianao, eo amoron'ilay tsirairay tokony hametrahana ny fanjaitra amin'ny 45-60 degre.
Mamihina mafy an'io kitay io, ary aforeto ny laka amin'ny farany.
Rehefa vita avokoa ny zava-drehetra, esory tsy ho eo amin'ny fanjaitra ny fantsona. Aza matahotra fa ny hatevin'ny tavoahangy tsirairay avy etsy ambony sy ambany dia somary hafa. Ilaina izany mba hahafahana mampitombo ny halavan'ny tariby amin'ny hoavy. Mariho fa ny elanelam-potoana sy ny halavan'ny rongony dia miankina amin'ny elanelana izay ampiharana ny fanjaitra. Ho tombontsoan'ny asa amin'ny ho avy, dia tokony hamokatra avy hatrany ny vokatra marobe, tsy mitovy amin'ny isa.
Mpianatry ny Master momba ny famoronana asa tanana avy amin'ny fantsom-panafody
Raha azo atao, ity fitaovana ity dia azo ampiasaina hamokarana vazy tena tsara tarehy sy tsy manam-paharoa, napkins eo ambony latabatra , mpankafy ary maro hafa. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra torolalana amin'ny antsipirihany miaraka amin'ny sary ho an'ny mpandahateny isika, mampiseho ny fomba famoronana amin'ny antsipiriany amin'ny tavoahangy amin'ny alàlan'ny ohatra famolavolana baoritra fingotra.
Mba hanatanterahana an'ity asa tsotra nefa mahaliana ity dia araho ny torolàlana soso-kevitra:
Alaivo ilay boaty izay kasainao hikorontana amin'ny fantsom-panafody, ary tapaho ny fonony ambony.
Eo am-pototry ny boaty, mariho mialoha ny toerana misy ny fantsona. Ny elanelana eo anelanelan'izy ireo dia tokony ho 3 santimetatra, na izany aza, tokony ho raisina ao an-tsaina fa ao amin'ny zorony tsirairay ao anaty boaty dia tsy maintsy apetraka ny ravina. Raha tsy izany dia tsy hijanona ny fanorenana. Rehefa vonona ny marika dia mametafeta ny rambony amin'ny toerana voatondro miaraka amin'ny fanampiana ny lakaoly fikororohana.
Avereno amim-pitandremana ny boaty, atsangano ny fantsona rehetra ary atsangano miaraka amin'ny tarika elastika.
Atombohy amin'ny fisaonana avy etsy ambany, famenoana tavoahangy ho an'ny andry tsirairay.
Aorian'izany, dia asio tavoahangy iray fanampiny mankany amin'ny faran'ny boaty, izay tsy maintsy mitombo tsikelikely.
Atombohy amin'ny fikorotanana ireo fanaka, fiovan'ny toetr'andro sy avy ao anatiny.
Rehefa vita ny fantsona dia ilaina ny hampitombo. Mba hanaovana izany, dia ampidiro ny andia-rindrina hafa amin'ny faran'ny ravin-tsofina ary alamino izany amin'ny lakaoly.
Avarao eo afovoan'ny fiatoana amin'ny tavy, afeno ny laharana, tadidio moramora ny tavoahangy, izay natsipy, ary nanapaka ilay izy.
Apetaho ny lokony izay ho toy ny fanamboamboarana ilay boaty, ary fefy ny halavany takiana aminy. Esory ny kasety ary manohy ilay tavy amin'ny fametrahana an'io elanelana io eo amin'ny jiro.
Doplytete ka hatrany am-potony ary hamita ilay andian-tsarimihetsika, hametraka ny rambony amin'ny lakaoly.
Tokony hiditra eto ianao dia sokajy tsy mahazatra toy izany.
Fenoy ny tavy araka izay aseho eo amin'ny sary.
Ampio satrin'ny satin-tsigara sy, raha ilaina, elanelan'ny fanaingoana hafa.
Karazan-tsakafo ho an'ny kindergarten
Ahoana ny fomba handefasana ankizy any an-toby maimaim-poana?
Rahoviana no mendrika ny fiterahana?
Ankizivavy kamboty ho an'ny kambana
Ahoana no hanomezana zana-boanjomam-behivavy hanavotra vitamina?
Monténégro - oviana no tsara kokoa ny mandeha fialantsasatra?
Patties miaraka amin'ny zezika sy zana
Pasta amin'ny sambo mitafo vy
Olivanina avy amin'ny marika
Fanolorana mainty hoditra - ny hevitra tsara indrindra sy ny vahaolana maotina amin'ny manikôlika amin'ny mainty hoditra
Ahoana no itoan'ilay rongony mandritra ny fitondrana vohoka?
Dress for corporate 2018 - 44 sary ny akanjo modely ho an'ny tsiro rehetra
Tolo-kevitra - inona ary ary ahoana ny fahasamihafana amin'ny fifanarahana?
Fefy voaravaka eo amin'ny lavarangana
Fihetseham-po: misakafo mandrakariva isika, nefa tsy mahazo lanja